जनता सचेत र अचेत बनाउने नौटंकी - Pradesh Today
Homeविचारजनता सचेत र अचेत बनाउने नौटंकी
यो देशमा जनता जनार्दन हुन् भन्न सिकाउने यिनै नेता हुन् । यो देशमा जनता देशका संवाहक हुन् भन्न सिकाउने पनि यिनै नेता हुन् । यो देशमा जनता लोकतन्त्रका पर्याय हुन् भन्न सिकाउने पनि यिनै नेता हुन् । यो देशमा जनता प्रजातन्त्रका हिमायती हुन् भन्न सिकाउने पनि यिनै नेता हुन् ।
यो देशमा जनता नेता जन्माउने जन्मदाता हुन् भन्न सिकाउने पनि यिनै नेता हुन् । यो देशमा जनता परिवर्नतका शक्ति हुन् भन्न सिकाउने पनि यिनै नेता हुन् । यो देशमा जनता परिवर्तनका निर्णायक शक्ति हुन् भन्न सिकाउने पनि यिनै नेता हुन् । यो देशमा जनता नेता चढाउने र ओराल्ने भ¥याङ हुन् भन्न सिकाउने पनि यिनै नेता हुन् ।
यो देशमा जनता राजनीतिका स्रोतकेन्द्र हुन् भन्न सिकाउने पनि यिनै नेता हुन् । यो देशमा जनता नेता छान्ने र चुन्ने परिक्षक हुने भन्न सिकाउने पनि यिनै नेता हुन् ।
यो देशमा नेताका मूल्याङ्कनकर्ता हर्ता–कर्ता हुन् भन्न सिकाउने पनि यिनै नेता हुन् । यो देशमा जनता नेताका पक्षधर हुन् भन्न सिकाउने पनि यिनै नेता हुन् । यो देशमा जनता नेताका पृष्पोषक हुन् भन्न सिकाउने पनि यिनै नेता हुन् ।
यो देशमा नेताका दाहिने र बायाँ शक्ति र हस्ती जनता हुन् भन्न सिकाउने पनि यिनै नेता हुन् । यो देशमा जनताका बर्दीबिनाका सिपाही हुन् भन्न सिकाउने पनि यिनै नेता हुन् ।
यो देशमा देशमा रक्षक र संरक्षक शक्ति जनता हुन् भन्न सिकाउने पनि यिनै नेता हुन् । यो देशमा देशभक्त र लोकतन्त्रप्रेमी जनता हुन् भन्न सिकाउने पनि यिनै नेता हुन् । यो देशमा शान्तिप्रेमी र शान्तिकामी जनता हुन् भन्न सिकाउने पनि यिनै नेता हुन् ।
यो देशमा सुशासन र सदाचार चाहने असल चिन्तक जनता हुन् भन्न सिकाउने पनि यिनै नेता हुन् । यो देशमा विकास र समृद्धि चाहने जनता हुन् भन्न सिकाउने पनि यिनै नेता हुन् । यो देशमा व्यवस्था र अवस्थाको जग बसाल्ने आधारशीला जनता हुन् भन्न सिकाउने पनि यिनै नेता हुन् ।
यदे देशमा जनता दुःखमा नआत्तिने र सुखमा नमात्तिने संयमशील हुन् हुन् भन्न सिकाउने पनि यिनै नेता हुन् । यो देशमा जनता धैर्यता र संयमताको बाँध नफुटाउने र नटुटाउने अंकरक शक्ति हु्न भन्न सिकाउने पनि यिनै नेता हुन् । यो देशमा दुःख र सुखको जुनसुकै बेला नेतालाई साथ, गाथ र हात दिने जनता हुन् भन्न सिकाउने पनि यिनै नेता हुन् ।
यो देशमा जनता आफू रोयर पनि नेतालाई हसाउने र फसाउने आकर्षणका केन्द्रविन्द् हुन् भन्न सिकाउने पनि यिनै नेता हुन् । यो देशमा जनता आफ्नो सर्वश्व गुमाएर नेताले सर्वश्व पाएकोमा भाग्यमानी ठान्ने र मान्ने महान शक्ति हुन् भन्न सिकाउने पनि यिनै नेता हुन् । यो देशमा जनता आशा र भरोसाका केन्द्रविन्दु हुन् भन्न सिकाउने पनि यिनै नेता हुन् ।
यो देशमा जनता आकाशको फल खस्ला र खाम्ला भनेर पर्खेर बस्ने प्रतिक्षाशाली हुन् भन्न सिकाउने पनि यिनै नेता हुन् ।
यो देशका जनता अविश्वासीका विश्वसनीय पात्र हुन् भन्न सिकाउने पनि यिनै नेता हुन् । यो देशका जनता पर्ख र हेरेको नीतिमा बाँच्न र बस्ने सक्ने धैर्यशाली हुन भन्न सिकाउने पनि यिनै नेता हुन् । यो देशका जनता नेताका लागि बाबु–आमा, दिदी–बहिनी, दाजु–भाइ, साथी–भाइ, नाता–गोता, शुभचिन्तक,
भन्द्रभलादमी लगायत सर्वेसर्वा शक्ति र भक्तिका केन्द्रविन्दु हुन् भन्न सिकाउने यिनै नेता हुन् । जनताका पक्षमा यसरी वकालत गर्ने र यसरी चिना–परिचय दिने यिनै नेता किन दुःख र पीडाको घडीमा यिनै जनतालाई तुच्छ ठान्छन् ?
जनतालाई यतिका विधि र ढंगले चिनाउने, जनाउने, देखाउने, बताउने, सिकाउने, जानकारी गराउने र सचेत गराउने यिनै नेताले आजको पछिल्लो यो दुःखजिलो घडी, अवस्था, बेला, समय, मौका, अवसर, ऋतु, काल र परिस्थितिमा किन यसरी अचेत बनाइरहेका छन् ?
हिजोसम्म त्यसरी चिनाएका यिनै नेताले आजका जनतालाई के भन्दैछन्, थाहा छ ? यो देशका भोका जनतालाई कुहिएको चामल भएपनि हुन्छ भन्दैछन् ।
यो देशका नाङ्गा जनतालाई फाटेको झुत्रो, झुम्रो र झाम्रो भएपनि हुन्छ भन्दैछन् । यो देशका गरिब जनतालाई २–४ सिक्का देखाएर पुग्छ भन्दैछन् ।
यो देशका रोगीलाई सिटामोल सुघाएर पुग्छ भन्दैछन् । यो देशका भूमिहीन जनतालाई बाटोघाटो र डोजर देखाएर पुग्छ भन्दैछन् । यो देशका अशिक्षित जनतालाई स्कुल खोले पुग्छ भन्दैछन् । यो देशका बेरोजगार जनतालाई विदेशीको गुलामी बनाए पुग्छ भन्दै छन् ।
यो देशका बेसहारा जनतालाई संघर्षको पाठ सिकाए पुग्छ भन्दैछन । यो देशका बुढापाका जनतालाई भत्ताको पासो थापे पुग्छ भन्दैछन् । यो देशका आदर्शवान जनतालाई विधिको दस्तावेज देखाए पुग्छ भन्दैछन् । यो देशका बोलवाला जनतालाई बोलन प्रतिवन्ध लगाए पुग्छ भन्दैछन् ।
यो देशका लेखक र साहितयकार जनतालाई शब्द जालमा फसाए पुग्छ भन्दैछ । यो देशका हुने खाने जनतालाई मुख टाले पुग्छ भन्दैछ । यो देशका हुँदा खाने जनतालाई सुन्दर भविष्यको सपना देखाए पुग्छ भन्दैछन् । यो देशका शान्तिकामी जनतालाई मन्दिर धाउन सिकाए पुग्छ भन्दैछ । यो देशका धार्मिक जनतालाई गायत्री जप्न सिकाए पुग्छ भन्दैछ ।
यो देशका स्वाभिमानी जनतालाई बाहिरको खान बानी पारे पुग्छ भन्दैछ । यो देशका आत्मनिर्भर जनतालाई उद्योगधन्दा र कलकारखाना बन्द गरे पुग्दछ भन्दैछ । यो देशका स्वतन्त्र जनतालाई कहिले ललितपुर कहिले भक्तपुर गर्न सिकाए पुग्छ भन्दैछ ।
यो देशका युवा शक्तिलाई वैदेशिक रोजगारको विज्ञापन बजाए पुग्छ भन्दैछ । यो देशका महिला जनतालाई महिलाको अधिकार सुनाए पुग्छ भन्दैछ । यो देशका निःसन्तान जनतालाई परिवार नियोजनको सूत्र सिकाए पुग्छ भन्दैछ । यो देशका धेरै सन्तान हुने जनतालाई मूर्ख बाबु–आमाको संज्ञा दिए पुग्छ भन्दैछ ।
यो देशका आशावादी जनतालाई यथास्थिति कायम राख्न सिकाए पुग्छ भन्दैछ । आखिर यो सबै किन र केका लागि ? उनले चाहेको बेला उनै जनता भगवान् बन्नुपर्ने उनले नचाहेको बेला उनै जनता पशु बन्नुपर्ने ?
यतिबेला जनतालाई भेडा बनाइरहेका छन् । किन यसले उनलाई चाहिएको बेला जनता मानव बन्नुपर्ने ? उनलाई नचाहिएको बेला जनता भेडा बन्नुपर्ने ? जनतादेखि नेता कहिले डराए ? कहिल्यै पनि डराएनन् बरु उल्टै हेपे, शोषण गरे र दमन गरे ।
जनतलाई जे भनेर उपमा दिए पनि र सम्बोधन गरेपनि यो उपमा र त्यो सम्बोधनको पालना कहिल्यै गरे ? आजसम्म नाटक रचिरहेका छन्, त्यो कसका लागि ? आजसम्म नौटंकी देखाइरहेका छन्, त्यो कसका लागि ? आजसम्म बेलगामको घोडासरी बनिरहेका छन् ।
जनता बिझाउने बेला पनि यही हो । शासक वर्ग के गर्न चाहन्छ ? जनता रिझाउन चाहन्छ वा बिझाउन ? रिझाउन चाहन्छ भने लोकतन्त्रमा जनता कस्ता हुन्छन् ? त्यसको लेखाजोख गरोस् । हिसाब किताब गरोस् र त्यही बमोजिम आफूलाई सच्याउने प्रयास गरोस् ।
यदि लोकतन्त्रको भजन गाएर त्यसको पञ्चामृत र प्रसाद आफू मात्र खान चाहन्छ भने त्यो कर्मको भागिदार पनि स्वयम् आफै बन्नेछ किन भने धर्म, न्यायको बाटो सधैं सत्य हुन्छ । सत्यको ढिलै भएपनि अवश्य जीत हुन्छ भने असत्यको ढिलै भएपनि अवश्य हार हुन्छ ।
त्यो कसका लागि ? नेताले आखिरमा जे–जे गरेपनि त्यो जनताका लागि होइन नेताले आखिरमा जे–जे नगरे पनि त्यो जनताका लागि होइन ? जनताका ढाँट्नैका लागि नेता भएका हुन् त ?
जनताले त कहिल्यै पनि नेतालाई ढाँटेनन्, ठगेनन्, धोका दिएनन्, सपना देखाएनन्, अभिनय गरेनन्, नाटक गरेनन्, नौटंकी गरेनन् ।
जनता जहिले पनि प्रष्ट, प्रत्यक्ष र पारदर्शी नै भए । तर जसले जनताका लाग गर्ने हो त्यो शक्ति किन आज लाचार बन्दैछ । जनतालाई सेचत बनाउने पनि यिनै नेता जनतालाई अचेत बनाउने पनि यिनै नेता ? भन्न सुहाउँछ ? देख्न सुहाउँछ, सुन्न सुहाउँछ ? भोग्न सुहाउँछ ?
जनताका लागि लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र, समाजवाद, गणतन्त्र, संघीयता हरेक–हरेक कुराको तारिफ गर्छन् तर त्यही धरातलमा भएको साँचो–साँचो, सत्य–सत्य, तथ्य–तथ्य, आफूले देखेको, सुनेको, भोगेको अप्रिय कुरा लेख्न, बोल्न, भन्न, सुन्न र सुनाउन अनुमति माग्ने बेला भइसेको छ ।
यो कसमाथिको प्रतिवन्ध हो । मीठो फल प्राप्त गर्नको लागि मीठै मलको बीउ रोप्ने कि न रोप्ने ? अमिलाको बीउ रोपरे सुन्तला खाने आशा गर्नुहुन्छ ? त्यो सुहाउने कुरा हो ?
आफूलाई इज्जत र कदर गरेनन् भनेर जनतालाई बाँध्ने किलो तास्न पाइन्छ । जनता बाँध्ने दाम्लो बाट्न पाइन्छ ? जनता बाँध्ने किलो ठोक्न पाइन्छ ?
लोकतन्त्र किन र कसरी के का लागि ल्याएको हो ? लोकतन्त्रमा जनताको स्थान, मान र हैसियत के हो ? यदि कोही कसैले लोकतन्त्र बुझेको छ भने उसले जनताको सर्वश्व बुझेको छ । यदि कोही कसैले लोकतन्त्र बुझेको छैन भने उसले जनताको (ज) पनि बुझेको छैन ।
जसले जनताको स्थान, मान र हैसियत कायम गरेर आफ्नो मन, बचन र कर्म सञ्चालन गर्न सकेको छ भने उसले लोकतन्त्र बुझेको ठहर्छ । यदि कोही कसैले जनताको स्थान, मान, हैसियत नबुझेर खाली आफ्नै मात्र मान, सम्मान, इज्जत र प्रतिष्ठान जोगाउने खेल खेल्छ भने उसले लोकतन्त्रको (ल) पनि नबुझेको ठहर्छ ।
लोकतन्त्र र समाजवादको हावादारी गफ लगाउनेले जनताको स्थान कायम गर्न किन सकेनन् ? आज लाज मान्ने कि नमान्ने ? देशमा लोकतन्त्र कसका लागि ? नेताका लागि कि जनताका लागि ? यो देशमा प्रजातन्त्र कसका लागि ? जनताका लागि कि नेताका लागि ?
यो देशका समाजवाद कसका लागि ? नेताका लागि कि जनताका लागि जवाफ दिन हिम्मत छ ? असली सेवा, सुविधा जति नेतालाई नक्कली भाषण, नक्कली आदर्श, नक्कली सिद्धान्त, योजना र नक्कली सपना जति जनतालाई । मेचीमा महामारी लाग्छा त्यहाँको नेताकहाँ पुग्छ ?
पश्चिम महाकालीमा । तर जनता आफ्नो मेची छोडेर कहिपनि जादैन र भाग्दैन । महाकालीमा महामारी चल्दा त्यहाँका नेता कहाँ पुग्छ ? पूर्व मेचीमा । तर महाकालीका जनता आफ्नो महाकाली छोडेर केहीपनि जाँदैन ।
यसरी आफ्नो देश, भूमि, माटो र जननीलाई माया गर्ने असली देशभक्त को रहेछ ? नेपालमा रुघाखोकी लाग्दा विदेशमा उपचार गर्न जनता कहिल्यै गएका छन् ?
खै त्यो सबैको लेखाजोखा गरेको ? देशमा शासन गर्ने शैली के हो ? नीति, नियम, विधि, पद्धति, संस्कार, संस्कृति हो कि होइन ? त्यो प्रयोग भयो कहाँ ?
एउटा सामान्य जनता नबुझ्नेले देशको लोकतन्त्र बुझ्छन् कसरी ? हिजोसम्म जनताका घर–घरमा गएर जनतालाई खुबैसँग पढाए, सिकाए, सेचत बनाए तर आज त्यो शिक्षाको अवसर खै ? जुन शक्तिले सचेत बनायो त्यही शक्तिले अचेत बनाउन पाइन्छ ? शासन व्यवस्था पत्ता लगाउने आधार के हो ? अर्थात् कुनै पनि देश, राष्ट्र वा मुलुकको शासन व्यवस्था कस्तो रहेछ ?
भनेर बाहिरैबाट देख्न सकिने, जान्न सकिने र बुझ्न सकिने आधार र संकेत के हो ? त्यो देशका जनता र तिनको अवस्था हो की होइन ? यतिबेला यो देशको र यी जनताको हालत देख्दा यो देशको कस्तो शासन व्यवस्थाको आँकलन गर्न सकिन्छ ? ठीकै छ यतिबेला त विश्व रोएको र विश्व दुखेको बेला भयो तर यो भन्दा कैयौं बलवान समय त नेपालमा खेर गएका छन् नि !
त्यो समयमा पनि किन देश जनता उभो लागेन ? सधै देशमा कोरोनाको कहर थिएन पनि हुने पनि छैन । फेरी सरकार चाहिने भनेको नै दुःख र पीडाको बेला त हो । अघिपछि त जेनतेन, जसोतसो गरेर खाइहाल्छन् नि ? यस्तै बेला शासक वर्ग असल बन्नुपर्ने होकी होइन ?
शासकले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्ने भन्दा अवसर कहिल्यै आउला ? यो बेला सहयोग जीवन भएका लागि अमीट छाप बन्ने छ भने यो बेलाको असहयोग जीवन भएका लागि अमीट कालो दाग बन्नेछ । जनतालाई रिझाउने बेला पनि यही हो ।
यहाँ दुःखमा रुने पनि नगरौं र सुखमा हाँस्ने पनि नगरौं । जीवनका लागि हाँसो र आँसुु जीवन चक्र हो । आत्तिनु र मात्तिनु पर्ने अवस्था छैन । यो बेला धैर्य र संयमता अपनाउने घडी हो । कसैले पनि धैर्यता नटुटाऔं ।